Maitiro ekumisikidza mumhanzi wako sema ringtone pa iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuisa yako mimhanzi kunge ma ringtone pa iPhone
Isa mimhanzi yako yaunofarira setoni pane chinhu cheIOS, zvese iPhone nePadad, rave dambudziko chairo pamusoro pemakore. Iyo ndeimwe yeaya quirks ekambani yeCupertino inoedza kuomesa izvo zvinofanirwa kuve zvakapusa kwazvo maererano neyakagadziriswa. Nekudaro, muActualidad iPhone isu tinogara tine mhinduro dzezvinhu zvese izvi, nei uchiramba.
Saka gara uone neiyi vhidhiyo dzidziso yatave takagadzirira iwe pamaitiro ekuisa chero rwiyo rwako senge roni ringtone pane iPhone. Isu tinoendako mune ino nyowani nyowani iyo Actualidad iPhone yakagadzirirwa iwe.
Chinhu chekutanga kuve nemumhanzi waunoda kushandisa se ringtone, kazhinji isu tinoshandisa faira mu "mp3" fomati, inova inonyanya kuzivikanwa uye isinganetsi kuita chinhu. Nekuti dhawunirodha mimhanzi yako yaunofarira iwe unogona kupfuura neiyi dzidziso pane yedu hanzvadzi webhusaiti Blusens. Saka uchave nemumhanzi waunoda.
Iva sezvazvingaita, Tichakusiira matanho ekuisa mimhanzi yaunoda pane yako iPhone senge ringtone.
Isu tinosiya pane desktop yePC yedu kana Mac iyo «mp3» faira ine rwiyo rwatinoda kuisa se ringtone.
Tinozvvuzvurudza muraibhurari yeTunes
Right tinya "rwiyo ruzivo" uye muchikamu chino tichaenda kuenda ku "sarudzo" uko kwatino gadzirisa nguva yenguva iyo yatiri kuda kurira se ringtone nekugadzirisa kutanga uye kupera.
Tinodzokera kuraibhurari uye tinosarudza iyo yepamusoro sarudzo "faira" kudzvanya "shandura", tinosarudza sarudzo "shandura kuAAC iyo ichagadzira duplicate faira muraibhurari yeTunes.
Iye zvino tinobaya-kurudyi kuimba rwiyo muAAC fomati uye sarudza "kuvhura muKutsvaga" kuti utiendese takananga kudanga rine rwiyo.
Isu tinofanirwa kusarudza iyo faira mu «m4a» fomati kuti tishandure mavara. Tichasiya zita rerwiyo asi pakupedzisira ticharuidza «rwiyo.m4r ». Kana iyo fomati ichinge yashandurwa, isu tinongofanirwa kudhonza kana kuikopa muToni raibhurari iyo inoonekwa kana uchibatanidza iyo iPhone ne iTunes.
Simply tIsu tinofanirwa kuwiriranisa iTunes neiyo iPhone uye inozozviratidza otomatiki mu «mheremhere» rwiyo rutsva kuitira kuti tikwanise kurusarudza senge ringtone.
Isu tinovhura iPhone marongero
Tiri kuenda kuSoindos
Mune ringtone, chikamu chitsva chichaonekwa kwatinogona kuona ringtone yatakawedzera
Nekudzvanya pairi tinogona kungoisarudza se ringtone.
Kana iwe usingabvumidzwe kudhonza zvakananga iyo "m4r" faira muraibhurari, Kana ikakundikana, chatinofanirwa kuita kudzvanya pane raibhurari yeApple Ringtones, ipapo tichafanirwa kudzvanya "CMD + C" kuikopa patinosarudza iyo uye "CMD + V" kuinamatira muTunes rwiyo . Kana iwe uri kushandisa Windows PC uchafanirwa kushandisa kiyi musanganiswa "CTRL + C" uye "CTRL + V" mushure meizvozvo.
Uye ndiyo nzira "yakapusa" ndiyo nzira yaunogona kusarudza mheremhere yaunoda pane yako iPhone zvichibva pamimhanzi yako wega, uye izvi chaizvo chaizvo nekuti ndiyo nzira yekudzivirira zvipingamupinyi zvisina musoro izvo zvinoitwa nekambani yeCupertino kuti ishandise Rakareruka maitiro senge kuseta irinyore ringtone, chimwe chinhu chiri nyore kwazvo pamidziyo kubva kumamwe mafemu senge Android. Senguva dzose, kana uine chero kusahadzika, usakanganwa kuti unogona kuzvisiya mubhokisi remashoko, asi Ndinokurudzira kuti iwe uende kuburikidza nevhidhiyo yatakasiya pamusoro weiyi dzidziso, nekuti iwe unozogona kukurumidza kuona iyo mirairo yatakapa pano uye hauzove nekukahadzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa yako mimhanzi kunge ma ringtone pa iPhone
WhatsApp inovandudzwa uye inotsigira Chiso ID
Boka FaceTime richaramba rakaremara muIOS 12.1.3 uye pakutanga